6 Nzira Dzepamusoro Dzokugadzirisa Kukwikwidzana Kwekutengesa: Nhungamiro Yezvemitemo yeVamabhizinesi. 0000
6 Nzira Dzepamusoro Dzokugadzirisa Kukwikwidzana Kwekutengesa: Nhungamiro Yezvemitemo yeVamabhizinesi.
Leave a Comment	/ Vatsigiri, Blog / By Sarah
6 dzePamusoro Nzira dzeKugadzirisa Yekutengesa Kukakavara kune Vanamuzvinabhizimusi
Bhizinesi uye kudyidzana zvinogona kushanduka chero nguva nekuda kwekutyora chibvumirano (chinozivikanwa sekutyorwa kana kutadza kuvimbisa). Uye izvi zvinogona kutungamira kumatare ekutengesa kana chibvumirano chebvumirano. Muchikamu chino, ngatinzwisise nzira nhanhatu dzekugadzirisa kukakavara kwekutengeserana.
Pakave nemazano mazhinji pamusoro penzvimbo yekushandira Dubai kuve ramangwana remahofisi, kunyangwe kushanda navo kuchiri muchikamu chekutanga. Zvese zvinoenderana nekuti zvakanaka sei mhedzisiro ichave inoenderana nekugadzirwa uye hunyanzvi.
Nematambudziko azvino ehupfumi uye kusajeka kweramangwana, vazhinji vezvemabhizimusi vari kuchema zvikwereti zvavo zvisina kuchengetedzwa. Kuti vagadzirise chikwereti chavo, vanofanirwa kupfuura nematare uye kurwa hondo dzepamutemo. Mune ino posvo, isu tichataura nezvenzira dzekugadzirisa matongerwo ekutengeserana. Tichatarisa pane izvo zvemabhizimusi kukakavara uye kuti zvinogona kugadziriswa sei nerubatsiro rwemagweta. Tichakurukurawo kuti munhu angazive sei gweta rakakodzera rinogona kubatsira mukumisikidza kutongwa.
Chii chinonzi Kutengeserana Kuverenga?
Commercial litigation ndiyo nzira yepamutemo inotorwa nekambani imwe kupokana neimwe. Mukati mekutongwa kwavepo uye kutonga kunoitwa mukufarira bato rinokunda. Kudyidzana mumabhizinesi kazhinji kunosanganisira kuvimbisa kuendesa sevhisi kana chigadzirwa mukutsinhana nemari kana kufunga kwakafanana. Kana chero bato rakatadza kuchengeta vimbiso, imwe yacho inogona kuzadzisa chibvumirano kana chibvumirano na kuzadza mhosva yehurumende.
Kusvikira zuva ranhasi, kutongwa kwematare inoramba iri nzira yekutanga yekugadzirisa yakakwira-kukosha uye kupokana kwakaomarara muAFA.
Kutongwa kwemabhizimusi inoramba iri nzira yekutanga yekugadzirisa yakakwira-kukosha uye kusawirirana kwakakomba muUAE.
Nyaya Dzakakosha dzekufunga usati waunza chiito kumatare ekutengesa
Bato rinotsvaga danho repamutemo rinofanirwa kufunga nezveanotevera mamiriro:
a. Kubudirira kwehupfumi kwemumhan'ari,
b) Hupenyu hwemumhan'ari kuti atize kana kutiza.
Bato rinogona kuisa chikumbiro chekuchengetedza padare redzimhosva kuona kuti midziyo haizoparadzirwa kana kuputswa nemumhan'ari.
Ndedzipi nzira dzekupedza nyaya dzekutengesa?
Enda kuburikidza neZvirevo Nehanya
Usati wasaina chero kondirakiti, iwe unofanirwa kugara uchiverenga zvakanyatsonaka. Uye kana paine kukakavara, pfuura muchibvumirano zvakare, uye panguva ino zvakanyatsonaka. Bhadhara tarisiro yako pane chaiwo zvikamu kana zvikamu zvinotsanangura chero chinhu nezve -
Izvo zvine hukama nekukakavadzana kwako. Uye kana iwe neako kontrakta mazadzisa zvisungo.
Maitiro aunoda kutevedzera mumamiriro ezvinhu akadaro kana uchigadzirisa kupokana kwako.
Chikamu chekumisa chinogona kukuudza maitiro ekugumisa hukama hwechibvumirano kana iwe ukafunga kuita kudaro.
Zvinogara zvirinani kuti iwe utaurirane nezvekontrakta usati waronga kutora matanho epamutemo Iwe unofanirwa kunongedzera chaiko nzvimbo kwaunofunga kuti kontrakita atadza zvisizvo uye kupa mukana wekupindura. Mazhinji emakakatanwa ari kungoitika nekuda kwekusafambidzana uye kusanzwisisana. Kurukurai nekontrakta nezve zviito zvekugadzirisa zvinoda kutorwa kugadzirisa mamiriro ezvinhu uye kuona zvaanopindura.
Iwe unogona zvakare kugadzirisa kutaurirana nekuunza magweta kumativi ese maviri. Iyo ndiyo nzira yakakosha yekugadzirisa kusawirirana. Iko kumashure-uye-mberi kutaurirana nechinangwa chete chekutsvaga mhinduro yegakava.
Iko hakuna chaiwo maitiro kana mitemo kune inotevera kutaurirana. Chero bato rinogona kusarudza uye kutanga kutaurirana nenzira yakadzikama. Nhaurirano inotangwa pane chero nhanho: kureva.
3. Bata Nyika Uye Mahofisi Eko
Mazhinji emakambani emakontrakta ehurumende kana mamwe mapoka ezvokutengeserana ane zvirongwa zvekugadzirisa kukakavara kwakawanda inosanganisira makondirakiti. Ivo vanogona kuve vanorerekera zvishoma kune iye kontrakta, asi ivo zvechokwadi vanofarira chero kukakavara kune chero nhengo dzadzo. Mushure mezvose, mukurumbira kwakakosha kune bhizinesi. Zvakare, kana iwe ukawana rubatsiro uye kugadzirisa gakava, zvinonyatso kudzora yako mari.
Mediation hachisi chinhu kunze kwenzvimbo yakatenderwa uye yakarongeka yekutaurirana. Inotarisirwa neyechitatu-bato kana munhu akazvimiririra anonzi murevereri. Iyi ndiyo nhanho inotevera kana ukatadza kuwana chibvumirano. Murevereri anobatsira kuona nyaya kubva kune ese mapato, sezvo iine maonero matsva emakakatanwa. Izvi zvinogona kubatsira kugadzirisa nyaya uye kusvika pachibvumirano chinogutsa. Murevereri anowanzo kuve mutongi kana gweta repamusoro.
Iyi nhanho inobatsira nekuita mapato ese kuti vaone maonero eumwe neumwe. Iyo isiri-yekusunga maitiro. inogona kungo sunga chete kana mapato akabvumirana pamwe nekuisa mazwi mukunyora, nekusaina.
Mhando dzenhaurirano uko kutaurirana kunogona kubatsira zvakanyanya -
Varidzi uye varidzi vemba
Kunetsana kwemhuri sekuchengeta vana kana kurambana
Chikamu chinotevera chekuyananisa. Mukutaurirana, kutonga kuri mumawoko mapato, asi mukugadzirisa, simba rinoenda kune wechitatu seasina rusarura kutora sarudzo dzekupedzisira.
Arbitration, pamwe nekutaurirana uye kuyananisa, zvikamu zveimwe nzira yekugadzirisa kusawirirana (ADR). Iyi nhanho inowanzo kuverengerwa mumamiriro ezvinhu akadai iko kugona kwemapato kutaurirana kwave kupera.
Kazhinji zvibvumirano zvinosanganisira arbitration clause, kunyanya mune kunyorera ye stock-broker account, mudhara account, kana kiredhiti kadhi. Mune ino nhanho, mapato ese ari maviri anomiririrwa negweta. Arbitrator anoteerera mativi ese, anoverenga zvinyorwa zvavo, humbowo, humbowo, uye osarudza. Maitiro acho akafanana nekutongwa, asi chete nekodzero dzakakwenenzverwa.
Maitiro aya haasunge, asi kana mativi ese akabvumirana, inogona kunge iri nzira yekusunga. Izvi zvinoonekwa sedanho rakakosha sedanho redzimhosva kumatare munzvimbo zhinji. Munhu mumwechete anogona kuita maitiro kana panhanho yevatatu uye anoitirwa mumakamuri emusangano kana mahofisi ekunzwa.
Imwe yezviitiko zvakajairika zvakagadziriswa nekutongwa kwebhizinesi kutyora chibvumirano. Mune ino nhanho, gweta rakakosha kwazvo. Kutongwa kwevanhu uye masisitimu nematare zvinoshandiswa padanho iri kugadzirisa makakatanwa epamutemo. Iyi nhanho inogona kumanikidza iro rakapesana kutora chikamu mumhinduro.
Sarudzo inoitwa maererano nemutemo uye nekushandisa chokwadi chakapihwa. Mutongo wekupedzisira unopedzisa maitiro ematare, uye sarudzo inosimbiswa. Nekudaro, bato rinokundwa rinogona kukwidza kudare repamusoro.
Kugadzirisa kukakavara kuri nyore kwazvo pachikamu chekutanga, chiri nyore sekutaura. Asi sezvo maitiro acho anonyanya kukura, iwe unofanirwa kuita kuti zvese zviitwe zviri pamutemo.
mukomana on Chii chinoitika kana ukasabhadhara chikwereti kana kiredhiti kiredhiti mukaka ku UAE?
Asad Bin Abood on Nhoroondo Dzinoita Zvakakosha! Medical Malpractice MuDubai, UAE